सभामुख अग्नी सापकोटाले संसद विघटनविरुद्ध चाल्ने असाधारण कदम के हो ? « Janata Samachar
सभामुख अग्नी सापकोटाले संसद विघटनविरुद्ध चाल्ने असाधारण कदम के हो ?
काठमाडौ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।
सभामुख सापकोटाको आह्वानमा दिउँसो २ बजे संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाका सबै दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको भए पनि ओली सहभागी नहुने बालुवाटारले प्रष्ट पारिसकेको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध असाधारण कदम पनि चाल्न सक्ने चेतावनी दिदै आउनुभएका सभामुख सापकोटाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको हो । बैठकमा छायाँ संसदका रुपमा वहस गर्ने सापकोटाको तयारी छ । तर उहाँले भन्दै आउनुभएको असाधारण कदम के हो ? भन्नेबारे भने अहिलेसम्म प्रष्ट पार्नुभएको छैन ।
दोस्रो पटक संसद विघटन भएपछि सभामुख सापकोटाले जेठ १३ मा कानुनविदहरुसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । कानुनविदसँगको परामर्शका क्रममा सापकोटाले संसद विघटनविरुद्ध असाधारण कदम पनि चाल्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । संविधान, लोकतन्त्र, जनताको अधिकारका लागि असाधरण कदम चाल्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो । घण्टा घण्टाका सबै परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर अघि बढ्न सक्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभएको थियो ।
केही कानुनविद्हरुले सभामुखलाई संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्टपति समक्ष सिफारिस गर्न सुझाव समेत दिएका थिए । कानुनविद्हरुसँगको छलफलपछि गतसाता सभामुखले पूर्व सभामुखहरुको बैठक बोलाउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ जारी नै रहेको अवस्था छ । सर्वोच्चमा विचराधीन अवस्थामा रहेको विषयलाई प्रभावित हुने गरि सभामुखले एकपछि अर्को बैठक र छलफल गर्नु कानुनतः अमिल्दो रहेको कतिपय कानूनका जानकारहरुले बताएका छन् ।
सभामुख सापकोटाको यस्तो कदम संविधानको भावना विपरित मात्र नभई अदालतको अवमूल्यन समेत हुने कानूनविद विपिन अधिकारीले दाबी गर्नुभयो ।